ရွှေမြန်မာတို့အတွက် ရွှေမင်္ဂလာ – Page5– Just another WordPress site
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဓားမဖြင့် ပြန်လည်ရန်ပြုခုခံသူအား PUMP ACTION သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ ည ၁၁နာရီခွဲအချိန်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှော်ကားနယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လှည့်ကင်း တာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် (တ/၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပန်းခြံ(၆)၊ သဇင်လမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးမှ အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်ပြီး ဓားမ ကိုင်ဆောင်၍ဖခင်ဖြစ်သူအား ရန်ပြုနေကြောင်း သတင်းအရ ရဲတပ်ဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနေရာ၌ နိုင်လင်းဖြိုး၊ (၂၂)နှစ်ကို အရိုးအသွား ၂၀ လက်မခန့်ရှိ ဓားမတစ်ချောင်းအား ကိုင်ဆောင်လျက် တွေ့ရှိရပြီး ၎င်းဓားမဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ပြန်လည်ရန်ပြုခုခံသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရမှုကြောင့် Read More
ခွန်းဆင့်နေခြည် ကို အရင်က ကြိတ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမ တွေပါဆိုတဲ့ သူထူးစံ
နေခြည်မရေ ငါ့ဆီမှာရှိတဲ့ ရိုက်ကွင်း ပုံတွေတင်ပေးလိုက်တယ်။ငါတို့အတူရိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား တွေလည်းမနည်းပါဘူးဟယ် နင်နဲ့ငါနဲ့က သူငယ်ချင်း မောင်နှမ တွေပါ။ ငါ့ဘက်ကကြိတ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတာ လေးတော့ရှိတာပေါ့ ခုတော့ငါလည်း ငါ့ ဘဝ နဲ့ငါဆိုတော့ နင့်ကိုလည်း မထိခိုက်အောင်လို့ ငါတို့ရိုးသားကြောင်း ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက် ဇာတ်ကား တွေရဲ့ရိုက်ကွင်း ပုံ တွေငါ့မှာအများကြီးရှိသေးတယ် ပြန်ရှာတွေ့ရင်တော့ ထပ်တင်ပေးလိုက်မယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ Credit – sunday journal
အနုပညာရှင် မင်းသမီးလေးတွေက အလှအပတွေကို ထိန်းသိမ်းတတ်ကြတာ သိကြတယ် မဟုတ်လား။ သူတို့ဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျလို့ သားသမီးတွေရှိနေရင်လဲ နုပျိုလို့ အပျိုလေးတွေတောင် အရှုံးပေးရလောက်အောင် လှနေကြတာပါပဲ။ အခုကတော့ ကလေးလေးနှစ်ယောက်ဆီ မွေးထားကြတဲ့ မင်းသမီးလေး တချို့ကို ဖော်ပြပေးမလို့ပါ။ သူတို့တွေကတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ သက်မွန်မြင့်၊ ချစ်သုဝေ၊ သန္တာလှိုင်နဲ့ စမိုင်းလ်တို့တွေပါပဲ။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ အရင်တုန်းကထက်တောင် ပိုလှနေပါတော့တယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Read More
ဈေးဝယ်သူက ငွေလွှဲလိုက်ပါပြီဆိုပြီး ATM စလစ်ပို့ပေးတယ်။ စလစ်ပို့ပေးတာကြည့်တော့လဲ အမှန်ကန်ဘဲဗျ။ card နံပါတ်ကော ငွေ amount ကော အားလုံးကွက်တိ။ ကဒ်ကအလွတ်ဆိုတော့ သူပို့တဲ့ငွေပဲရှိမှာပါလို့တွေးပြီး တပတ်ေ လာက်နေမှ သွားထုတ်တော့ ငွေမထွက်ဘူး။ KBZ bank မှာ complain သွားတတ်တာ ဝန်ထမ်းတွေက ကဒ်နံပါတ်တောင်းပြီးစစ်ပေးတော့မှ အတုကြီးလွှဲထားတာ ဗူးပေါ်သလိုပေါ်တော့တယ်။ သူလွှဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ နေ့ကလဲ ကဒ်ထဲကိုငွေတစ်ပြားမှ မရောက်ဖူးတဲ့လေ။ ဒါဆို စလစ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အမှန်အကန်ထွက်နေပါလားဆိုတော့ ခုခေတ် Read More
လာကမှာ ရေမြင့်မှ ကြာတင့်သလိုဘဲ အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းမှ မိန်းမသားဘဝလှပတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တဲ့အချက်ဘဲ ဖြစ်တယ်…. အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ ငွေကြေးအပြင် ဘဝအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ချို့လိုအပ်တယ် …. မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်တဲ့စိတ်အပြင် ယုံကြည်အားကိုးမှုတွေအပြည့်ပါ ပါတယ်…. ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံး ပုံအပ်ပြီး လက်တွဲလျှောက်လှမ်းရမယ့် အိမ်ထောင်ဦးစီဖြစ်လာမယ့်သူကို ယုံကြည်မှု လေးစား အားကိုးမှု မရှိပဲနဲ့ဘယ်မိန်းခလေးမှ လက်တွဲဖို့ကို ခေါင်းငြိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး…. မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်လင်သားအပေါ် ချစ်တယ်ဆိုတာထက် Read More
ဒုလ္လဘရဟန်း ဝတ်သွားကြတဲ့ ဇာတ်ပို့မင်းသား သုံးယောက်
မြန်မာဇာတ်ကားများရဲ့ အမာခံ ဇာတ်ပို့တွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုဘင်း၊ ကျော်ဇင်ထွဋ်နဲ့ အောင်ဇော်မင်းတို့ သုံးယောက်ကတော့ ဒုလ္လဘရဟန်းအဖြစ် ခံယူလိုက်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားအများစုတွင် မပါမဖြစ်ဆိုသလို သရုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့ သူတို့သုံးယောက်ကို အကယ်ဒမီမရတဲ့ မင်းသားတွေအဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေက ချစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်) မှာတော့ အလုပ်တွေ များတဲ့ကြားက သုံးယောက်သား စုံပြီး သာသနာ့ဘောင် ဝင်လိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွန်းလွန်းဂူဝိပဿနာ ကျောင်းတိုက်တိုက်မှာ ပဉ္စင်းခံလိုက်ကြတယ် လို့လည်း သူတို့ အသိုင်းအဝိုင်းက Read More